Xiaomi Mi 8, iinkcukacha ezithe kratya ziyavela ngaphambi kokumiliselwa | Iindaba zeGajethi
IXiaomi Mi 8 iya kuba yeyona nto iphambili kwinkampani yaseTshayina eguquguqukayo. Ukuba ngumphezulu olandelayo kuluhlu lomenzi, kubekho intetho eninzi malunga nento onokuyilindela kweli qela. Nangona kunjalo, njengoko kusenzeka phambi kwako nakuphi na ukumiliselwa okukhulu, uthotho lokuvuza aluyeki ukufika. Kwaye ngoku sikubeka ngaphambi kwedatha yamva nje ebonakele koku Xiaomi Mi 8.
Kuyabonakala ukuba, uXiaomi ucinga ukwazisa iinguqulelo ezimbini zesi sixhobo sithandwayo: IXiaomi Mi 8 kunye neXiaomi Mi 8 SE -Lokugqibela njengo "uHlelo oluKhethekileyo" kwaye kunokwenzeka ukuba lube nobukhulu obukhulu bescreen. Ngoku, phakathi kwezinto eziye zafunyanwa, sinokukuxelela ngeendlela ezahlukeneyo; apho umfundi weminwe ekugqibeleni aya kufumaneka kwaye uza kuthini Kuya kuba neAnimojis njengoko siza kukubonisa kwividiyo kamva.
I-Xiaomi yinkampani eyenza zombini ukuba ube ziifowuni ze-avant-garde kwaye uzisa ukubonelela ngesikuta sombane ngokupheleleyo kwi-1.000 euro. Nangona kunjalo, iyaziwa kakhulu ngamaqela okuqala esiwakhankanyileyo. Amehlo akwiXiaomi Mi 8 elandelayo kwaye ukuza kuthi ga ngoku le datha ilandelayo iqhubekile. Into yokuqala ngokuqinisekileyo sinokuyifumana ngemibala emibini: emnyama okanye emhlophe.
Okwangoku, nangona ubungakanani bekhusi abaziwa ngalo mzuzu, kuthiwa esi siginali sinakho Nyusa iphaneli ye-OLED Kuzo zombini ezi nguqulelo, iphaneli yenguqulo ye-SE inkulu. Okwangoku, ngokwamandla, iprosesa ethathelwa ingqalelo yi I-Qualcomm Snapdragon 845 kunye ukuya kuthi ga kwi-6GB ye-RAM ukuya kuthi ga kwindawo yokugcina eyi-256GB.
Ngoku, ngokwemifanekiso esandula ukuvuza, kukho enye yeempawu ebekulindeleke ukuba zidityaniswe kule Xiaomi Mi 8 kwaye kubonakala ngathi inkampani ikhethe uyilo olulondolozayo: umfundi weminwe uya kubekwa ngasemva kwisisu semoto.
Ewe, kweli candelo linye lasemva siya kuba nekhamera ephambili ene-sensor ezimbini (i-20 ne-16 megapixels); Ngelixa inzwa yangaphambili iya kuba nenzwa ye-megapixel eyi-16 nge Ukuqwalaselwa kobuso be3D kwaye oko kuya kunceda owakho umsebenzi "weAnimojis" ngokugqibeleleyo njengoko ubona kule vidiyo ilandelayo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » IXiaomi Mi 8, iinkcukacha ezithe kratya ziyavela ngaphambi kokumiliselwa kwayo
Inqanaba legazi elifunyenwe kwimiphefumlo emnyama yahlaziywa kwakhona